Mukhtaar Ganey Oo Ahaa Horjooge si aad ah ugu dhowaa Abu-Mansuur Al Amriiki oo indhaha laga saaray | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Mukhtaar Ganey Oo Ahaa Horjooge si aad ah ugu dhowaa Abu-Mansuur Al Amriiki oo indhaha laga saaray
Wararka laga helaayo Xabsiga Maleeshiyada Alshabaab ee Degmada Sablaale, ayaa sheegaya in halkaasi indhaha looga saaray Mukhtaar Ganey oo kamid ahaa Saraakiishii la shaqeyneysay Abuu Mansuur Al-amriiki.
Mukhtaar Ganey waxa uu xiligii hore Hogaamin jiray jabhadda Bay iyo Bakool, waxa uuna Wakhtigii danbe ahaa Horjooge la shaqeynaayay Al-amriiki, iyadoona markii danbe Amniyaadka Maleeshiyada ay u geysteen dhaawac uusan kasoo kabsan, kadibna ay Labada indhoot uga dhex saaren Xabsi ku yaalla Degmada Sablaale, sida uu sheegay Sarkaal kooxda ka tirsan.
Mukhtaar Ganey ayaa la qabtay isagoo raashin u waday muhaajiriin ka carartay shirqoolka Hogaanka Kooxda Alshhabab ee ku noolaa howdka Somalia waxaana la Tilmaamayaa in amarka Indhaha looga saaray uu bixiyay Hogaamiyihii Geeriyooday ee Axmed Cabdi Godane.
Dhanka kale, Hogaanka Cusub ee Alshabaab ayaa iminka isku Khilaafsan in Mukhtaar Ganey laga siidaayo Jeelka islamarkaana loo sameeyo Xanaano gaar ah, halka qaarna ay kasoo horjeesteen in Jeelka laga saaro maadaama uu Xogo badan ka hayo Alshabaab.
Lama Oga sida laga yeeli doono maxbuus Mukhtaar Ganey oo aan xiligaani waxba arag.